यी हुन विश्वका सबैभन्दा शुन्दरी महिला नेता
३१ बैशाख । इनसिस्ट अफ पोष्ट डटकमले गरेको सर्वेक्षणमा विश्वका सबैभन्दा राम्रा महिला २० नेताको सुचि सार्वजनिक गरेको छ । यिनीहरुले आफ्नो काम त धेरै राम्रोसँग गरिरहेका छन साथसाथै उनीहरुको शुन्दरतामा झुम्नेहरु पनि कम छैनन् । १. रुबी धल्ला : भारतीय मुलकी क्यानडेली साँसद रुबी धल्ला अति शुन्दरी छिन । उनलाई प्रायजसो म्यागजिनले विश्वको तेस्रो सेक्सी सुन्दरी नेताको दर्जा दिन्छन् । २ .मरिना शुस्टर : २००५…विस्तृत समाचार »
​अब आफ्नो भाग्य रेखा आँफै हेर्नुहोस् !
जीवनमा सफलता र असफलता भाग्य रेखा अनुसार मिल्ने ज्योतीसशास्त्रहरु बताउने गर्दछन् । त्यस्तै हाम्रो हातमा हुने भाग्य रेखाले सफलता र असफता निर्धारण गर्ने पनि बताउँछन् । जस्तै मानिसको हत्केलामा हुने भाग्य रेखाले जीवनका धेरै कुरा निर्धारण गर्दछ । कहाँ हुन्छ भाग्य रेखा ? तपाइको हत्केलाको मध्य– भागमा माझी औंलाको फेदसम्म पुगेको हुन्छ, भाग्य रेखा । त्यहाँको भागलाई शनि पर्वत भनिन्छ । र हत्केलाको कुनै भागबाट…विस्तृत समाचार »
​मोर्चाले सिंहदरबार घेराउ गर्ने भनेपछि..................
३१ वैशाख, काठमाडौँ । मधेसी मोर्चाले जेठ दुईमा सिंहदरबार घेराउ गर्ने घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । मोर्चाको तयारीसँगै राजधानीमा सुरक्षा कडा पारिएको छ । बारा, पर्सा, रौतहट, सिराहा, जनकपुर, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीबाट हजारौंको संख्यामा कार्यकर्ता राजधानी उतारेर सिंहदरबार घेराउ गर्ने मोर्चाको तयारी छ । मोर्चाले हजारौँ मानिस काठमाडौँमा उत्राने भएपछि प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले मधेसी मोर्चाको सिंहदरबार घेराउमा प्रहरी संयमित हुन र सकेसम्म…विस्तृत समाचार »
​“ टिका टिप्पणी गर्दैमा सरकार ढल्दैन ”
३१ वैशाख, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारका विषयमा अनावश्यक टिकाटिप्पणी भएको बताउँदै टिकाटिप्पणीले सरकारलाई कुनै असर नपार्ने दावी गरेका छन् । उनले अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्म यहीँ सरकार रहने बताए । व्यवस्थापिका संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रमले महत्वका साथ अघि सारेका संविधान कार्यन्वयनको कुरा, भूकम्प पुनर्निर्माणका कुरामा हामी सबै सहमत रहेको बताए । ओलीले सरकारद्वारा…विस्तृत समाचार »
​तपाईलाई थाहा छ ? नेपालमै २० परिकारका मःम पाइन्छ
तिर्सना गिरी । तपाई खाजा खान जादा मेनु नै नहेरी अडर दिने खाजाको नाम हो मःम । चोक चोकमा मःम पसल छन् तर पनि मःम खानेहरुको घुईचो देखिन्छ। किन भने मःम सबैलाई मन पर्छ। हो प्राय सबैको मन पर्ने यो खाजा भेज र नन भेज गरी बिभिन्न थरिका स्वादमा पनि पाईन्छ । तपाईले पनि धेरै प्रकारको मःम खानु भएको होला । मटन मःम, पोर्क मःम,…विस्तृत समाचार »
मानवीय सम्वेदना बोकेका मनै रुवाउने विश्वका यी १० तस्बिर
तस्बीर शब्दको समुद्र हो । तस्बिरको अगाडी कुनै पनि शब्दको बयान फिका हुन्छ । दुनियाँका यस्ता तस्बिर छन् जसलाई देखेर डर र दुर्घटना एकै पटक मान्छेको मनमा आउँछ । यी तस्बिरहरुले धेरै मार्मिक दुर्घटना र मानिसको दुख पिडालाई सामुन्ने ल्याउँछ । १. कोशोवोका शरणार्थी ः यो फोटोले विस्थापित हुनुको पिडालाई सम्बोधन गर्छ । अजीम शाला नाम गरेका यी २ बर्षका बच्चालाई तारबाट झिक्दै गरेको यो…विस्तृत समाचार »
​सरकारले सार्बजनिक गर्यो पञ्चवर्षिय पुनर्निर्माण योजना, २ वर्ष भित्र भूकम्पपीडितलाई घर
३० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले भूकम्प गएको एकवर्षपछि पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माणको खाका सार्वजनिक गरेकारेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा पुनर्निर्माणका लागि आठ खर्ब ३८ अर्बका वित्तिय आवश्यकता पर्ने तथ्यांक सहित योजना प्रस्तुत गरेका हुन् । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको पूर्वानुमान प्रतिवेदनमा ६ खर्ब ६९ अर्बको प्रक्षेपण गरिएको थियो । सरकारले यसअघि रिएको आँकलन भन्दा केही बढ्नुको कारण विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारिएको र विभिन्न…विस्तृत समाचार »
​वायुसेवा निमगले माग्यो कर्मचारी
३० वैशाख, काठमाडौँ । नेपाल वायु सेवा निगमले विभिन्न पदमा कर्मचारीहरु माग गरेको छ । विस्तृत समाचार »
सीके राउतको अन्तर्वार्ता लिने एबीसी टेलिभिजनलाई क्षमायाचना गर्न निर्देशन
३० वैशाख, काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालले सीके राउतको अन्तर्वार्ता प्रशारण गर्ने एबीसी टेलिभिजनलाई आम जनतासमक्ष क्षमायाचना गर्न निर्देशन दिएको छ । काउन्सिलको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिको बैठकले एविसी टेलिभिजनलाई आम जनतासमक्ष क्षमा याचना गर्न निर्देशन दिएको हो । ०७२ साल चैत्र १७ गते एविसी टेलिभिजनको ‘एबीसी वाच’ नामक कार्यक्रममा राउतसँगको अन्तर्वार्तावाट नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक सदभावमा खलल् पुगेको काउन्सिलले जनाएको छ । एविसी…विस्तृत समाचार »
​प्रधानमन्त्री ओलीको सदनलाई सम्बोधन
३०, वैशाख, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै छन् । प्रम ओलीको सम्बोधनमा विशेषगरी भूकम्प पुनःनिर्माणका पछिल्ला गतिविधि एवम् मुलुकको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा जानकारी आउने बताइएको छ । साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्री ओलीले सदनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा यतिखेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदले आ–आफ्ना धारणा राखेका छन् । विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 1002 1003 1004 1005 1006 Older Last ›